Shiinaha Quusin Wasakhda Biyaha wasakhda Biyaha Warshad iyo soosaarayaasha | Tongke
Qaabka Maya No WQ
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Tooska ah waxaa badanaa loo isticmaalaa bamgareyn la'aanta daxalka, heerkulka ka yar 60 ° C, adkaha la joojiyay (oo aan ku jirin fiber, grits) wax ka yar 150 mg / L oo ah bullaacadaha ama qashinka. Nooca LPT bamka qallalan ee toosan wuxuu kujiraa LP nooca bambooyin toosan, oo ku saleysan kororka iyo koorta, dhigay saliida tuubada saliiddeeda waa biyo. Qiijin karaa heerkulka ka hooseeya 60 ° C, u diri kara si ay ugu jiraan hadhuudh adag (sida bir duug ah iyo ciid wanaagsan, dhuxul, iwm) ee bullaacad ama biyo qashin ah.
Qiimaha dhismaha oo hooseeya
Xakamaynta sirdoonka ee hawlgalka nabdoon
Quusid liidata oo diidan
Qiimaha socodsiinta hoose
Faahfaahin Faa'iidada astaamaha loogu talagalay WQ taxanaha Bamka Bullaacad Bullaacad ah
1. Badanaa kuwa wax soo saara oo leh mashiinka dalool ka hooseeya 400 waxay u yimaadaan sidii laba-orodle oo wax kiciya oo in yar oo iyaga ka mid ah ayaa ah maroojiyeyaal laba qaybood oo kala duwan leh. Inkasta oo inta badan kuwa wax soo jiida ee wata mashiinka aperture 400 iyo wixii ka sareeya ay u imaanayaan sida qulqulaya qulqulaya qulqulaya oo in yar oo iyaga ka mid ahi ay yihiin kuwo labalaab-kiciyayaal ah Orodyahanka waasacda mashiinka waasacku wuxuu u ogolaanayaa adkaha inuu si fudud udhaafayo isla markaana fiilooyinka si aan xasiloonayn u duubaya si ay ugufiicnaato daadinta wasakhda iyo wasakhda.
2. Laba shaabadood oo wajiga hore ah oo madax-bannaan oo madax-bannaan ayaa si taxane ah loo rakibay, oo leh habka rakibidda sida habka rakibidda gudaha, iyo, marka la barbar dhigo qaabka rakibidda dibedda, dhexdhexaadku wuu ka dhib badan yahay daadinta iyo sidoo kale lammaanaha is-xirashada ayaa sahlan saliideeyay saliida qolka saliida. Boos khaas ah oo khaas ah ama tolmo yar ayaa loo isticmaalaa in looga hortago miraha adag in lagu shubo shaabadda mashiinka mashiinka si loo hubiyo shaqadiisa xasilloon. Habka qaabeynta shaabadda farsamada gaarka ah iyo isku dhafka isku dhafka ayaa ka dhigaya garabka ganaaxa ee usheeda dhexe gaagaaban, qalafsanaan culus iyo bood bood yar, faa iidada ugu badan ee yareynta qulqulka ka imanaya shaabadda farsamada iyo kordhinta nolosha.
3. Mootada heerka IPX8 ee difaaca waxay ku shaqeysaa qaab quusin ah waxayna haysaa saameynta ugu fiican ee qaboojinta. Nadiifinta darajada F waxay ka dhigeysaa hagida loo adkeysan karo heer kulka sare iyo, marka lala barbardhigo matoorrada guud, adkeysi badan
4. Isku-dhafka saxda ah ee khaaska ah koontaroolka korantada, heerka dareeraha sabeynta-kubbadda iyo qaybaha ka hortagga ayaa fuliya kormeeraha tooska ah iyo digniinta loogu talagalay daadinta biyaha iyo kuleylka kuleylka, ilaalinta muddada gaaban, culeyska, wejiga la'aan iyo goynta korantada-lumay, xakamaynta tooska ah ee otomaatiga bilowga, joogsiga, is-beddelka iyo ugu hooseeya qoto dheer ee bamka, iyada oo aan loo baahnayn dad gaar ah oo lagu daryeelayo, ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ayaa la heli karaa inta u dhexeysa bilowga yareynta is-xoojinta iyo jilicsanaanta elektarooniga ah bilow. Kuwaan oo dhami waxay hubinayaan isticmaalka aaminka ah ee mashiinka oo aan walwal lahayn.
5. Labada qaybood ee matoorrada iyo haydarooliga si toos ah ayey isugu xiran yihiin, iyaga oo aan u baahnayn in loo rogo usheeda dhexe si ay udub dhexaad u noqdaan, si fudud loo kala jaro loona ururiyo si waqtiga loo badbaadiyo, looga faa'iideysto dayactirka goobta, iyadoo la dhimayo waqtiga la joojiyey, iyadoo la badbaadinayo kharashka dayactirka; Qaab dhismeedka fudud oo is haysta ayaa ka tagaya mug yar, kaliya qalabka qaadista fudud ayaa loo baahan yahay, maaddaama qalabka wax qaadista ee gaarka ah lagu dhejiyo bamka; aag yar oo dhulka ah iyo mashiinka ayaa si toos ah loogu dhex ridi karaa balli bullaacad ah, iyada oo aan loo baahnayn guri gaar ah oo mashiin ah, sidaa darteedna maalgashiga dhismaha lagu badbaadin karo in ka badan 40.
6. Waxaa lagu heli karaa shan nooc oo rakibid ah oo aad adigu dooran karto: auto-coupled, movable hard-pipe, movable soft-pipe, nooca qoyan oo go'an iyo nooc qalalan oo qaab rakibida oo go'an.
Rakibaadda otomaatiga ah ee isku-xidhka ah waxa loola jeedaa isku xidhka mashiinka iyo dhuumaha biyaha ka baxa waxaa lagu sameeyaa kursiga tuubada biyaha ka soo baxa ee iswada isku xidhka, iyada oo aan la isticmaalin qalabka wax lagu xidho, iyo, goorta la kala saarayo matoorka iyo tuubada biyaha ka baxaysa kursiga, hoos u dhig oo keliya iyadoo ay weheliso usha hagaha ka dibna kor u qaad, si fudud ugu filan inaad ka xorowdo walwalka iyo dhibaatada oo aad waqti lumiso.
Mashiinka bullaacadda ee quusin kara qalabka qalalan ee go'an kaliya ma beddeli karo bamka qashinka bullaacadda ee qotomiska ah laakiin sidoo kale kama cabsanayo daadadka, sidaa darteed looma baahna xarun gaar ah oo ka-hortagga daadadka, faa iidada u leh hoos u dhigidda qiimaha dhismaha.
Labada-tuubbo adag oo la dhaqaajin karo iyo kuwo tuubbo jilicsan wata, iyo sidoo kale nooca qoyan ee go'an, waa dhammaan qaababka aad u fudud ee rakibidda.
7. Mashiinka qaboojiyaha ayaa lagu dhejin karaa bamka, kaas oo kaliya ku filnaan kara qaboojinta mashiinka laakiin sidoo kale waxtar u leh hoos u dhigista heerka balliga bullaacadaha si looga soo saaro wasakhda dhexdeeda illaa heerka ugu sarreeya.
8. Bamku wuxuu ku shaqeeyaa habka quusinaysa, sidaa darteed ma jiraan wax dhibaato ah oo buuq ah iyo waxtar u leh ilaalinta deegaanka.
Hore: MVS Vertical Axial socodka iyo Isku-dhafka Isku-dhafka ah ee bamka bullaacadaha
Xiga: Isweydaarsiga sanduuqa biyaha ee badweynta ka soo baxa
Awood 10-8000 m3 / saac
Heerkulka dareeraha ah ilaa 60 ºC
Cadaadiska howlgalka ilaa 18 bar
Qaybaha ugu muhiimsan ee WQ bamka bulaacada ee quusin kara
Daboolka saambada & Qalabka saar Bir tuur, birta ductile, ahama
Dareere Birta tuur, Birta ductile, Bir aan xadi lahayn, Bronze, Dplex SS
Qalabka gawaarida Bir bir ah
Usheeda dhexe 2Cr13, 3Cr13, Duplex SS
Shaabad farsamo Lammaanaha isdifaaca Garaafka / Silicon Carbide
Jaranjarada / Tungsten Carbide
Carbide Silicon / Silicon Carbide
Guga Bir daxal laheyn
Qaybta Rubber NBR
Daaweynta bullaacadaha si looga baxo wasakhda
Qashinka mashruuca wareejinta biyaha
Biyaha roobka oo ay kujiraan adag iyo fiilooyin dhaadheer
Mashiinka sare ee cadaadiska sare ee bamka
CZ Biyo-mareenka dhamaadka qeyb-biyoodka nuugista dhamaadka ...